अनायास शंकाको ज्वारभाटा किन ? | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
अनायास शंकाको ज्वारभाटा किन ?
आज नेपाली नेताहरु भारतीय नेता देखि तर्सेका छन् । जो सित जुन बेला हुनु पर्ने हो त्यो बेलामा चुक्ने काम विग्रेपछिको शंकाको के काम । हरेक शंकाले केवल नेपालीले नेपालीलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । २००७ सालमा राजा त्रिभुवनले नेपालीलाई थाहा नदिएर भागी भारत पसेका थिए । खुल्लम खुल्ला रहेका तत्कालका नेताहरुले न देशको रक्षा गर्न सक्यो न राजा राजसंस्थाको । हजारौं वर्ष देखि स्वतन्त्र रहेको देशले परतन्त्र भोग्नु परिरहेको छ । प्रजातन्त्रको नाममा देशको चाबी भारतलाई बुझाउदाको प्रथम पीडा थियो २००७ साल । त्यसपछि सोही पिडाको नविकरण भयो २०६२÷६३ मा । दिल्ली दरबारको संरक्षकत्वमा गरिएको १२ बु“दे रुपी नेपालको भोटे ताला भारतलाई बुझाएको अवस्था ।
आज प्रजातन्त्रको अनुभुति भन्दा पनि अराजकताको अनुभुति भइरहेको छ । आज हामीबाटै हामी शोषित भएका छौं, ठगिएका छौं । जब देशमा एक तन्त्रिय शासन थियो त्यो भन्दा बढी क्षति हुन गएको छ । जहानिया शासनमा केवल ४ जना विधिवत मारिए भने त्यस्तै ५ जना अवैधानिक रुपबाट मारिए तर २००७ पछिका प्रजातन्त्रवादी मानव अधिकारीवादीहरुले कति जना मारे हामी गन्न सक्दैनौं । अनसनमा मारिएको लास फुजेलका अधिकारी २÷३ वर्ष पुग्यो । टिचिङ अस्पतालको लास घरका मृत चौकिदार बनेका छन् भने उनकी श्रीमती इन्साफ माग्न वीर अस्पतालको मृतशैय्यामा मुर्छित छन् ।
भ्रष्टाचार गाउ“गाउ“मा पुगेको छ । साझा सम्पत्ति माथि लुटपाट भई रहेको छ । स्वदेशमा रोजगारी गरी जीविका चलाउने युवा नेपाली नागरिकलाई षड्यन्त्रमा पारी षड्यन्त्र भइरहेको छ । स्वदेश र स्वदेशी सरकारप्रति वितिष्णा फैलाउने काम भएको छ । सामाजिक सद्भावना खलबलाएको छ । विदेशी उद्योगी व्यापारीलाई प्रोत्साहन दिएको छ । नेपाली साधारण उद्योगी व्यापारीलाई विभिन्न बहानामा दुःख दिने र सताउने काम भएको छ । चन्दा वा अन्य आर्थिक लाभ दिन नसक्ने व्यापारी साना उद्योगीहरुलाई सताउने काम भएका प्रमाणहरु मौजुदा रहेका छन् । बलवानहरुले पदाधिकारीहरुसित मिलोमतो गरी देशको सम्पत्ति साझा सम्पत्ति दोहन गरेकै छ । अरु त छोडौं मासिक रुपबाट सरकारी निकायका व्यापारिक भवनहरु भाडामा लिई नियमित घरबाहाल कर र भाडा बुझाई रहेपनि आतंकित गरिएका छन् । कस्तो अनौंठो न्याय व्यवस्था ? हलेदो भनेर कोट्याउनु छैन सबैको सामु छ ।
आज जो नेपालको हतिमा बोल्छ उसमाथि शंका गरिन्छ भने के भन्ने ? एक समय थियो नेपाललाई आफ्नो वशमा गर्ने आफ्नै नीति लाद्ने कुटिल चाल थियो नेहरु खानदानको । त्यसबेला नेपालले आफ्नो अस्तित्व बचाउन सकेन र उसमाथि शंका गर्न सम्म सकेन तर आज नेपालको हितमा काम गर्छु भन्ने मोदी सरकार माथि शंका उपशंका गर्नु हितकारी हुदैन । आज भारतीय परराष्ट्र मन्त्री नेपाल आएको बेला के.पी. शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री मार्फत् भारतसितको सुमधुर सम्बन्ध कायम नहोस् भन्नेहरुको खेलले गर्दा स्वराज माथि शंका उत्पन्न गराउने गिरोह सक्रिय भएको छैन भन्न सकिने अवस्था छैन । मोदी सरकारले नेपालको सीमानामा बृद्धि गर्न नसकेपनि मित्रतामा भने अवश्य बृद्धि हुने हुदा त्यो सहन नसक्नेहरुले नेपाल भारतबीच मधुर सम्बन्ध हुन दिइरहेको छैन । जुन शक्तिले राजा वीरेन्द्र र राजीव गान्धीबीच परस्पर शंका पैदा गराई अनमेल गराउने काम गरेथ्यो त्यही शक्ति लोकतन्त्रपछि मोदी सरकार र नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा भावी प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली बीच अनमेल गराउन भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ । त्यसकारण मोदी र ओलीले अत्यन्त सक्रिय भई त्यस्ता बदनियत कपटी खेलाडीबाट बची दुबै देशको परस्पर हित हुने काममा अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।
← ७ नं. प्रदेशको सुङरकोट, एक झलक
राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पाँचवटा मात्रै →